Ndi Infographics ojoo ha na emebi emebi ahia gi? #BWELA | Martech Zone
Ndi Infographics ojoo ha na emebi emebi ahia gi? #BWELA
Tọzdee, Nọvemba 3, 2011 Sọnde, Septemba 30, 2012 Douglas Karr
Tom Webster si isi ihe dị n'ụtụtụ a na BlogWorld Expo dị oke mma… mana ndị anyị nọ na ụlọ ọrụ ọdịnaya were n'ezie shellacking. Tom bụ onye ọnụ ọgụgụ ya ma were ọrụ ya nke ọma… yabụ mgbe ọ hụrụ mwakpo nke infographics na webụ na-akpali echiche ọjọọ na data ezughị ezu, ọ na-egosi ha dị ka egwu.
Okwu Tom bụ na a na-eji infographics anapụta content na ndi mmadu na-amanye ha - oge ufodu na oge a kara aka. Tom ekwenyeghi na a na-eji ha maka nzube ha bụ isi - ịgbasa data na usoro ihe eserese nke dị mfe igwu. (Mara: Edereghị m ma ọ bụ dee ọtụtụ ederede n'oge isi okwu, yabụ enwere m olileanya na post m ebe a na-anọchi anya ozi ya).
Otu ihe atụ Tom nyere bụ infographic n'okpuru ebe the ebe onye na-ese ihe were nnwere onwe gbanwee nha (ouch). Ọbụghị naanị nke ahụ, enwere ọtụtụ mgbanwe ndị ọzọ metụtara na ihe ọmụma ahụ enweghị isi:
Onwere onye juru ajuju?
Anaghị m ekwenye na Tom gbasara ogo na omimi nke data ahụ, ihe kpatara ya na mmekọrịta ya, yana ihe eserese nke infographics na-enye. Mana iwe na-ewe m na nke a bụ otu ụzọ ọfụma ọ dị mgbe ndị na-eweta ọdịnaya wepụrụ ozi a. Ihe omuma ihe na-enye data na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi agaghi-ahuta? Hogwash.
Ihe omuma ihe omuma na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ka mmadu mata na oge nke tweet gi nwere ike emetụta ogo nke isonye na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụ nwee ike ịkarị ndị na-ege gị ntị ị na-erute. N’uche m, ọ bụrụ ihe omuma ihe kwesiri ekwenye ị na-emere anyị ọghọm, mgbe ahụ nchịkọta ngwa ga-adị ọcha ọjọọ. E weghaara data niile nchịkọta chọrọ nyocha na igwu ala miri emi iji chọta ohere iji melite arụmọrụ gị n'ịntanetị.
Tom kwuru, sị:
Ihe omuma banyere ihe ndi mmadu adighi nma n'inye azịza, kama obu maka imuta ịjụ ajuju kacha mma.
Gịnị ma ọ bụrụ na Tom tụgharịa aka ya:
Infographics adịchaghị mma n'inye azịza, mana infographics dị mma maka ịmụ ihe juo ajuju
Amaja m na-ekwu na a ọjọọ infographic nwere ike ịbụ n'ezie na-arụpụta ihe karịa nnukwu, n'ihi na ọ na-ewelite ụdị ajụjụ na mkparịta ụka a. My ikpeazụ blog post n'ezie kwuru nke a ... ebe ihe infographic na Youtube na-egbu TV e tinyere n’uche.
Echere m na ndị na-eso ụzọ m nwere ọtụtụ ọkaibe karịa ka Tom nwere ike iche. Anyị abụghị ndị ọnụ ọgụgụ, mana anyị anaghị ewere ozi ọhụụ anyị hụrụ dị ka eziokwu. Tom kwuru na ọ dị ndị na-emepụta ọdịnaya mkpa rụọ ọrụ ụlọ ha ma mepụta ihe omuma ihe omuma karia ịdabere na ndi ozo. Ekwetaghị m. Ekwenyere m na uru nkesa na ikwurịta (nke a na-akpọ) ihe ọmụma na-adịghị mma bụ na ha na-akpali mkparịta ụka.
Ihe a dị n’elu abụghị nke ndị na-emepụta ọdịnaya, ihe a na-ekwu maka ya ịrụ ọrụ omume ụlọ akwụkwọ ha. Ihe omuma ederede egbughi azum ahia, ndi ahia n’eme.
Ndi Youtube Na-egbu TV?
Nov 4, 2011 na 2:41 PM
Daalụ maka ịga nnọkọ m, Douglas - na maka ajụjụ gị mgbe m kwuchara. Anaghị m eleda anya na ọkaibe nke ndị na-ege gị ntị! Ihe omuma ihe omuma nwere ike buru ihe magburu onwe ya, ma di nkpa - oge 5 nke m nọrọ na Florence Nightingale nwere olile anya na ekwuputara ya - ma mmadu, bu ihe omuma ihe ojoo na-eme ugbu a. Obi dị m ụtọ na m malitere mkparịta ụka - ma enwere m obi ụtọ na ị na-aga n'ihu.
Nov 4, 2011 na 3:13 PM
Daalụ Tom! Ọ bụ nnukwu okwu na… M ga-ekwusikwu ike na nkatọ m na-eme ihe ọjọọ infographics n'ihi ya. Nakwa, m ga-adọ ndị na-ege m ntị aka na ntị mgbe ọ bụ nkwubi okwu nwere ike itinye ha na nsogbu!
Nov 8, 2011 na 10:53 AM
Ugbu a ka ndị ahịa na-ejide onwe ha na "njikọ nri nri" ohere nke infographics, ọ dị ka ị gaghị aga ụbọchị na-enweghị ọhụụ ọhụụ. Arefọdụ dị ukwuu ma ndị ọzọ dị egwu. Ekwenyere m na ọ bụrụ na ịmepụta ụdị ọdịnaya ọ bụla (gụnyere infographics) ma ọ bụrụ na ọ bụghị ezigbo mma, echegbula.